सक्छौं त पहाड थाम्न ? :: Press Chautari ::
विषय प्रवेश : डेस्टीनेसन डिसी
एनआरएन अमेरिकाको तेस्रो बार्षिक साधारण सभा हालै सम्पन्न भएको छ । मार्चको २१ र २२ मा अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा सम्पन्न उक्त सभा एनआरएन अमेरिकाको इतिहासमा सबैभन्दा बृहत र ऐतिहासिक बनेको छ । कुनै यस्तो समय पनि थियो अमेरिकामा एनआरएन न त सक्रिय थियो न जनस्तरमा यसप्रति कुनै चासो नै । यसर्थ तेस्रो साधारण सभा र बर्तमान कार्यसमितिलाई सफल कार्यक्रम र कार्यकालको रुपमा सबैले स्विकार्नु पर्छ र यसको लागि खगेन्द्र क्षेत्रीको नेतृत्व र उनको सम्पूर्ण टिमलाई जस दिनु कसैले कञ्जुस्याँई गर्नु हुदैन सायद ।
औंलामा गन्न सकिने सदस्य र नेतृत्वबाट बिस्तारित एनआरएन अमेरिका तेस्रो साधारण सभासम्म आईपग्दा दश हजार भन्दा बढि सदस्य बनाउन सफल भएको छ । संस्थाको लागि यो संख्या आफैमा ठूलो उपलब्धिको रुपमा लिनु पर्छ । यहि संख्याले मात्र पनि एकातिर अन्तराष्ट्रिय रुपमा अमेरिकाको एनआरएन उपस्थिति बलियो देखिन्छ भने यहि सदस्य संख्याले पुर्याउने न्युनतम योगदान मात्रै पनि पर्याप्त हुन सक्छ । यद्यपी यो संख्या आफैमा प्रशस्त भने पक्कै होइन ।
डिसीमा सम्पन्न साधारण सभामा आयोजित बिभिन्न कार्यक्रमहरुको समिक्षागत रिर्पाेट र प्रतिवेदन संस्थाले चाँडै सार्वजानिक गर्ला नै । यद्यपी कार्यक्रममा सहभागी एक सदस्य र सञ्चारकर्मीको हैसियतले भन्नु पर्दा साधारण सभा सहभागितामूलक र उत्साहपूर्ण रुपले सम्पन्न भएको पंक्तिकारको ठम्याँई हो । संस्थाप्रति जनस्तरले देखाएको चासो र नेतृत्वको लागि उत्साहपूर्ण सहभागिता आफैमा संस्थाको उपलब्धि मान्नु पर्छ । बिभिन्न राज्यबाट सहभागी भएका बिभिन्न क्षेत्रमा स्थापित र प्रतिष्ठित एनआरएन सदस्यहरुको उल्लेख्य सहभागिताले तेस्रो साधारण सभाको गरिमा बढेको थियो भने व्यावसायी, राजनीतिकर्मी, समाजेवी, युवा, बिद्यार्थी, कलाकार, पत्रकार एवं अन्य बिभिन्न पेशामा आवद्ध सदस्यहरुको उत्साहपूर्ण उपस्थितीलाई संस्थाले उर्जाको रुपमा लिन सके आगामी दिनहरुमा संस्थागत उज्यालो निश्चित् प्रायः छ ।
यसैगरी साधारण सभामै बिशेष कार्यक्रमको रुपमा राखिएको बिधान संशोधन सम्बन्धी गणपुरक सदस्यकै सहभागितामा बिभिन्न बुँदाहरुमा प्रस्ताव, छलफल र निर्णयहरु भए । तेस्रो साधारण सभाको प्रमुख उपलब्धि यसैलाई मान्नु पर्छ । संस्थाको बार्षिक साधारण सभामा संस्थागत प्रतिवेदन, प्रगती विवरण र कार्ययोजना सम्बन्धी कार्यक्रमहरुलाई अपुग भएको समय अनावश्यक सांस्कृतिक कार्यक्रम, बिभिन्न गोष्ठि र कार्याशाला जस्ता कार्यक्रमबाट कटाउन सकिन्थ्यो । त्यो हुन सकेन । उल्लेखित कार्यक्रमहरु साधारण सभामा नराखेर सम्मेलनमा समाबेश गरिनु पथ्र्याै । हुन त केहिले यसलाई सम्मेलन, महासम्मेलन भनेर सम्बोधन गरिएको देखिन्छ, यो संस्थाको साधारण सभा हो यहि नामले सम्बोधन हुनु पर्छ भन्ने मेरो निजी मान्यता समेत पनि हो ।
विधान मसौंदा समितिले नवौं पल्ट संशोधन गरेर प्रस्ताव गरेको संशोधित विधानमा सदस्यहरुको राय बाँझिनुलाई सामान्य प्रकृया नै मान्नु पर्छ । यद्यपी अल्पमतको भावनाको कदर गर्दै सर्व स्विकार्य बहुमतको निर्णयलाई आत्मसात् गर्नु पनि संस्था/संगठनको विश्वव्यापी सर्वमान्य प्रक्रिया हो । बाँकी, कार्यक्रम स्थलमा भएको अस्त व्यस्तपन कसैलाई अस्वाभाविक लाग्यो होला, कसैलाई कार्यक्रममा प्रदान गरिएको खानपान अस्वास्थ्यकर लाग्न सक्छ, कोहिले मञ्चमाथि पाएको प्रशंसा सम्मान अरुचीकर पनि लाग्यो होला । यी सब ऐजन ऐजनका सवालहरु हुन प्रमुख मुद्धा होइनन् ।
साँच्चै सक्छौं त पहाड थाम्नलाई ?
सन् २००३ को अन्ततिर प्रवासी नेपालीहरुको हक, हित र अधिकारको निम्ति “नेपालीका लागि नेपाली” भन्ने मुल नारा लिएर स्थापित यस गैर आवासीय नेपाली संघको राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिका सन् २००६ सालको मध्यतिर स्थापना भएको हो । स्थापनाकालका धेरै बर्षहरु एनआरएन अमेरिकाको लागि उपलब्धीमुलक रहेनन् । संस्थाभित्रै नेतृत्वपक्षबीचको लडाई झगडा साधारण सदस्यसम्म आईपुग्दा अन्य सदस्यमा संस्थाप्रतिको आकर्षण घट्दो रह्यो । कुनै यस्तो समय थियो एनआरएन अमेरिकामा न त पूर्णकालिक नेतृत्व रह्यो न त सदस्यता संख्या नै पर्याप्त ।
अब एनआरएन अमेरिकामा यी माथि उल्लेखित दुवैको कमी छैन् । संस्थाप्रतिको चासो ह्वात्तै बढेर सदस्यता संख्यामा उल्लेख्य बृद्धि हुनु र नेतृत्वको लागि आकांक्षा राख्नु स्वाभाविक मानिन्छ । फलस्वारुप पछिल्लो समयमा एनआरएन अमेरिकाको नेतृत्व गर्न कम्मर कसेका आकांक्षीहरु बिभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा छ्याप्छ्याप्ती छरिएकाछन् ।
एनआरएन अमेरिका अब सयको संख्याबाट बढेर हज्जारौंको संख्यामा पुगेको छ । र यो निरन्तर बढ्दो क्रममा पनि छ । बिभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिएको छु भनेर सस्तो लोकप्रियताको लागि फेसबुक र अन्य माध्यममा देखिएका उम्मेदवारहरु कतिको बलिया उम्मेदवार हुन् ? जनजनले सोध्ने प्रश्न यहि हो । निर्वाचन समितिले उम्मेदवारी दर्ता मिति नतोक्दैमा बिभिन्न पदको उम्मेदवार हुँ भन्दै भोट अपिल गर्ने उम्मेदवार कस्ता उम्मेदवार हुन् ? यत्ति मात्रै होइन, निर्वाचन कार्यालय वा अनलाईन मार्फत उम्मेदवारी दर्ता नगरी मलाई भोट दिनुहोस भन्दै भोट माग्दै हिड्ने उम्मेदवार भोली कथम्कदाचित प्रक्रियागत दायरामा परेन भने के होला ? “म उठ्दैछु र म उठि सकेको छु” भन्नुमा आकासपत्तालको फरक छ ।
नेपाल र अमेरिकाको झण्डाबीचमा फोटो टाँस्यो र फेसबुके वालमा एनआरएन अमेरिकाको फलानो पदमा उम्मेदवार दर्ता गरायो । साथी हो, भतिज हो, गाउँको हो, जिल्लाको हो, आफ्नो जातको हो, पार्टीको हो...गोडा दुईएक सयले लाईक गरिहाल्छन् । अनि शुरु हुन्छ भोट काउन्ट । र लाग्दो हो मैले जिती हाल्छु । कुनै जाति, पार्टी, झुण्डमा ८/१० जनाबीच परिचित छु भन्ने भ्रममा एनआरएन अमेरिकाको नेतृत्वको लागि तपाई हामी जो कोहि तयार हुनुहुन्न । हुँदै हुन्न ।
निश्चित् हो अमेरिकामा एनआरएन सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ । यसबीच उम्मेदवारहरुको चर्चा पुरै अमेरिकाभर हुनेछ । तर के ति सबै उम्मेदवारहरु निःस्वार्थ सेवाभावले एनआरएनको लागि फेसबुकमा टाँसिएका हुन् र ? आफ्नो लोकप्रियताको लागि मात्रै आकांक्षा पालेका हुन् कि वास्तवमै बलिया उम्मेदवार भएर उभिएकाछन् ? आफु लुते लाग्दा लाग्दै दुई चार जनाले बलियो छस भनेको भरमा दौडन खोज्नु आपैmको लागि भार हुन सक्छ । दस पन्द्र जनाको संख्यामा खोलिएका संस्थाको सदस्य (अध्यक्ष नै सहि) भएकै भरमा उम्मेदवारी दिनेहरुमा सादर अनुरोध–“भ्रम मुक्त भएर बिना स्वार्थ आपैm बलियो भएर उभिनुहोस्, तपाईको जीत निश्चित् छ ।”
होइन भने हिजोको जस्तो छैन समय र छैन कुनै दिन । पोहोरकै जस्तो मौसम नहुन सक्छ यो बर्ष । नफुल्न सक्छ परारको जस्तै फुलहरु यसपाली । पुगनपुग ११ हजार सदस्यभित्र पार्टी, जाति, बर्ग, क्षेत्र, रंग सबै सबैखाले मान्छेहरु छन् । त्यसमध्ये तपाईको पक्षमा एउटा मात्र पनि भोट नहुन सक्छ ।
पहाड जस्तै फैलदो छ अब एनआरएन । यसपालीको समय सन्दर्भमा सबै सबै उम्मेदवारहरुलाई सोध्नु मन छ तपाई हाम्रो साझा प्रश्न-
“सक्छौं त पहाड थाम्न ?”
मंगलवार, २०७१ चैत्र ०९ गते ०१:१६ / Tuesday, Mar 24, 2015 1:16 am